Shiinaha No MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Print Liverpool Bullet Fabric Daabacaadda Loogu Talo Galay Soo Saaraha Dharka iyo Badeecada | Wenchang
Yoga Xidho dhar
Maro orod ah
Dharka Dibadda Lagu Xidho
Dharka dharka lagu ciyaaro
Dhar Magaalada Xidhan
Dharka aasaasiga ah
Majiro MOQ Custom Knit Polyester Spandex Digital Daabac daabacaadda Qoraalka Masaarida Liverpool ee Dharka Dharka
Maya MOQ Custom Knit Polyeste ...
Qalajinta Degdega ah Jacquard Mesh ...
Ers-Friendly Grs Certified ...
Dhidid dhidid 87% polyamide 13% ...
Lycra Qurxinta Weft Knitted ...
Polyester jilicsan Recycled ...
Tayada Sare 100 biyuhu ...
Shayga Maya ： KWB-2125
Waxyaabaha ： 95% Polyester 5% Spandex
Dabeecad ： Dhidid / Dhaqdhaqaaq dhaqsaha leh / Raaxo leh / dib loo warshadeeyay / dabacsanaan sare / Dhaqso badan oo midabkeedu sarreeyo / Qaabka caadada ah / Muunad bilaash ah
FOB Qiimaha: Mareykanka Sida ku cad Xaaladda / Yardarada Gaarka ah
Bixinta: L / CT / T Western & Midowga
Kartida Bixinta: 50000 Cadad / Cadad Maalintii
Suuqa: Ameerika, Yurubta Dhexe
Faahfaahinta Baakadaha: Ku xirxirashada Rolls-ka Boorsooyinka Balaastikada Ama Ku Xidhnow Shuruudahaaga
Amarka Ugu Yar: Tirada Tijaabada 1KG
SOO SAARKA SOO SAARKA Xabad FABRIC
Shayga MAYA KWB-2125
Nooca Alaabada Samee-si-Order
Waxyaabaha 95% Polyester 5% Spandex
Ballaaran 73/75 ″
Cufnaanta Loo habeeyay
Muuqaalka Si dhakhso ah u qalalan / Kala bixid / Neefsasho / Wicking
Isticmaal Carruurta Qaansooyin / Dhar / Bac
Suuqa USA / Canada / Australia / UK / Jarmalka
Shahaadada RSG / SGS / Oeko-tex
Goobta Asalka Shiinaha (Dhul)
Faahfaahinta Baakadaha xirxiraan ku duuban baco balaastik ah
ama ku saleysan shuruudahaaga
Lacag bixinta L / CT / T
Daabac Patter / Design Custom Sublimation print & Digital print sida naqshad caadadiisu tahay
C0-Magac Adidas / Nike / H & M / VANS / Decathlon
Adeeg Muunad Bilaash
Qaabka loo habeeyay Taageero
ADEEGA & FAA'IIDADA AY LEEDAHAY Muunad bilaash ah ayaa la heli karaa.
Qaabka loo habeeyay, ballaca, culeyska.
Gaarsiinta degdega ah.
Adeeg horumarineed muunad fiican.
R & D adag iyo kooxda Xakamaynta Tayada.
Habka Wax Soo Saarka 1.Nala soo xiriir
8. Lamaane Dheer
Monochrome jacquard waa dhar jacquard dyed-dhar jaakquard ah waxaa lagu tolay jacquard loom ka dibna waa la midabeynayaa waana la dhammeeyaa. Dharka dhammaaday waa midab adag; Jacquard midabbo badan waa dhar midabkiisu yahay midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midab badan oo midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midab badan oo midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midab badan oo midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu yahay midabkiisu midabkiisu badan yahay oo midabkiisu yahay midab; -saamaynta heerka, iyo darajaduna way ka sarreeysaa. Ballaarta dharku kuma koobna, oo dharka suufka saafiga ahi xoogaa wuu yaraanayaa, ma kubbaddalayo, mana yaraanayo. Dharka Jacquard guud ahaan waxaa loo isticmaalaa qalabka wax soo saarka dharka heer sare iyo dhexe ama alaabada loo isticmaalo warshadaha qurxinta (sida daahyada, qalabka fadhiga). Nidaamka wax soo saarka ee dharka jacquard waa mid adag. Dunta dunta iyo dunta weftku way isku xidhan yihiin kor iyo hoosba, iyagoo samaynaya qaabab kala geddisan, oo leh isku-dhafnaan iyo isku-xirnaan, iyo qaabab qurux badan sida ubaxyo, shimbiro, kalluun, cayayaan, shimbiro iyo dugaag ayaa la tolay.
Dareenku waa jilicsan yahay, jilicsan yahay oo sibiibix ah oo leh muuqaal gaar ah, dhalaal wanaagsan, jajab wanaagsan iyo hawo hawo, iyo xawaare midab sare leh (dheeh dun). Qaabka dharka jacquardku waa mid weyn oo aad u fiican, midabyaduna waa kala duwan yihiin oo saddex-cabbir leeyihiin, halka qaabka marada yar-yar-yar-yar-yar-yar yahay mid fudud oo keli ah.
Dharka Jacquard (6 xaashi)
Satin jacquard fabric (maro): dunta iyo weft waa la isku dhajiyaa ugu yaraan hal mar seddexdii maro, sidaa darteed weelka loo yaqaan 'satin weave' wuxuu ka dhigayaa cufnaanta dharka mid sare, sidaas darteed dharka ayaa ka sii dhumuc weyn. Waxyaabaha loo yaqaan 'satin' ee loo yaqaan 'satin' waxay ka qaalisan yihiin kuwa la midka ah ee la midka ah iyo kuwa la isku tolo. Dharka lagu tolay satinka loo yaqaan 'satin weave' ayaa si wada jir ah loogu yeeraa sida dharka satinka. Maaddada Satin waxay leedahay dhinacyada hore iyo xagga dambe. Dhibcaha isdhaxgalka ee wareegga dhammaystiran ayaa ugu yar, iyo sabaynta ayaa ugu dheer. Dusha sare ee dharku wuxuu gebi ahaanba ka kooban yahay sabayn xagga jihada loo maro. Dareenka dharka satinku waa jilicsan yahay. Maaddada Satin waxay leedahay dhinacyada hore iyo gadaal, oo dusha maradu waa mid siman, ganaax leh oo dhalaalaya. Dharka ugu badan ee loo yaqaan 'satin' waa satin xariijimo, oo loo yaqaan 'satin strip'. Waxay u qaybsan tahay laba nooc oo dhar ah: 40 xaradh oo satin ah oo 2 mitir 4 balac ah iyo 60 faatiin oo satin ah 2 mitir 8 balac ah. Marka hore dharka iyo ka dib habka midabaynta, dharka noocan oo kale ah guud ahaan waa midab adag, oo leh fiditaan fidsan oo fidsan. Dharka cudbiga ah ee saafiga ah ayaa yara yaraada, ma kubbaddaalo, mana fududa in la libdho.
Satin jacquard dhar (dhar)
Aqoonta "Satin Jacquard Fabric".
Marka hore, fadlan fahan saddexdaas fikradood: tolmo toosan, laba jibbaaran, iyo satin.
Toddobaad caadi ah: Dharka lagu tolay dunta caadiga ah waxaa loo yaqaan 'weave'. Taasi waa, dunta dunta iyo dunta weft-ka ayaa isku-laaban dun kasta oo kale (taasi waa, dunku waa 1 kor iyo 1 hoos). Maro noocan ah waxaa lagu gartaa dhibco fara badan oo isdhaxgalka ah, qaab adag, xoqitaan, iyo dusha oo siman. Dharka sare ee daabacaadda guud ahaan waa dhar caadi ah oo xiiran.
Labalaab: Dagaalku iyo weftku way isdhaafaan ugu yaraan hal mar labadii tiilba, taas oo ah, 2 kor iyo 1 hoos ama 3 kor iyo 1 hoos. Ku darista dhibcaha xargaha iyo weft si ay u beddelaan qaabdhismeedka dharka, oo si wada jir ah loogu yeero dhar jilicsan. Astaamaha dharka noocan oo kale ah waa mid qaro weyn oo leh dareen xoog leh qaab-dhismeed saddex-cabbir leh. Waxaa jira 30 laamood, 40 laamood, iyo 60 laamood.
Mashiinka Satin: Ballaaran iyo weft waa la isku dhajiyay mar kaliya ugu yaraan saddex dhudhun oo kala fog, sidaa darteed tolmada satin waxay ka dhigeysaa dharka mid cufan, sidaas darteed dharka ayaa ka sii dhumuc weyn Waxyaalaha la tolay ee loo yaqaan 'Satin' waxay ka qaalisan yihiin kuwa la midka ah ee la midka ah iyo kuwa la isku tolo, oo dusha sare ee dharku waa mid siman, ganaax leh oo dhalaalaya. Toddobada loo yaqaan 'Plain toave', twill weave, iyo satin weave ayaa ah saddexda hababka isdhaafsiga ee dunta aasaasiga ah. Ma jiro farqi u dhexeeya wanaagga iyo xumaanta. Mid waliba wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah. Dhexdooda, satin waa inuu noqdaa kan ugu fiican dharka suufka saafiga ah.
Soo saarista dharka yoga, waxaan sidoo kale leenahay dharka dabaasha, surwaal xeebta, dharka isboortiga, xirashada orodka, xirashada barafka, dharka buuraha oo xiran.
Waxaan ku saleysanahay Jiangsu, Shiinaha, laga bilaabo 1995, ka iibso Suuqa Gudaha (60.00%), Waqooyiga Ameerika (10.00%), Koonfur-bari
Aasiya (10.00%), Afrika (10.00%), Koonfurta Aasiya (5.00%), Koonfurta Ameerika (3.00%), Koonfurta Yurub (2.00%). Waxaa jira guud ahaan qiyaastii 51-100 qof
2. sideen u damaanad qaadi karnaa tayada?
Had iyo jeer muunad horay-u-soo-saar ah ka hor intaan la soo saarin tiro;
Markasta kormeerka kama dambeysta ah ka hor rarka;
3. maxaad naga iibsan kartaa?
Dharka Dharka, Daabacaadda Wareejinta
4. maxaad nooga iibsaneysaa alaab-qeybiyeyaal kale?
1.macluumaadka ugu muhiimsan: Dib-u-warshadaynta dharka, dharka dharka lagu dabaasho, Dharka dharka isboortiga 2. Shahaadada heerka Oeko-tex ayaa la bixin doonaa. 3.Color
Warbixinta tijaabada soonka waxaa lasiinayaa ilaa AATCC 3-4 fasalka 4. Amarka yar waa la qaadi karaa 5. alaabada dib loo warshadeeyo
5. Maxay yihiin adeegyada aan bixin karno?
Shuruudaha Gaarsiinta La Aqbalay: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDP, gaarsiinta degdegga ah, DAF ；
Lacagta Bixinta La Oggolaaday: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Nooca Bixinta La Oggolaaday: T / T, L / C, MoneyGram, Kaadhka Amaahda, Western Union, Lacagta;
Luuqada Lagu Hadlo: Ingriis, Shiino, Jabaaniis, Boortaqiis!
Hore: Qalajinta Degdega ah Jacquard Mesh 84% Nylon 16% Spandex Tolida Dharka ee Shaati / Isboorti / Coat
Dharka Daabacaadda Custom
Dharka Rasaasta Liverpool
Daabacaadda Qaanso Dharka
KY waxay ka mid tahay kuwa hormuudka ka ah hogaamiyaha adduunka ee xalka tamarta la cusboonaysiin karo ee wax ka badalaya isla markaana dib u qeexaya sida ilaha tamarta waarta looga faa'iideysan karo aduunka oo dhan. Ku soo bandhiga 18 waddan oo ku baahsan Aasiya, Australia, Yurub, Afrika iyo AmeerikaVeztaz waxay awood siinaysaa mid cagaaran berri.
MAYA 190, Wadada Galbeedka Yanyu, Magaalada Qianzhou, Degmada Huishan, Wuxi, Jiangsu
rukumo joornaalkayaga! Had iyo jeer la xiriir!